Ihowuliseyili CLG-6059T kwi-Intanethi eseleyo kwiChlorine Analyzer yoMvelisi kunye noMthengisi | IBOQU
Yintoni i-Chlorine eseleyo?
Ukubeka iliso kunyango lwe-chlorine yokubulala iintsholongwane njengamanzi okuqubha, amanzi okusela, uthungelwano lombhobho kunye nonikezelo lwamanzi lwesibini njl.
Egqithileyo I-CLG-2059S / P kwi-Intanethi eseleyo kwiChlorine Analyzer
Okulandelayo: I-YLG-2058 ye-Residual Chlorine Analyzer
PH / Temp / chlorine eseleyo
Umhlalutyi oshiyekileyo wechlorine
0-20mg / L (pH: 5.5-10.5）)
Isisombululo kunye nokuchaneka
Isigqibo: 0.1 ℃ Ukuchaneka: ± 0.5 ℃
Isigqibo: 0.01pH Ukuchaneka: ±I-0.1 pH
Isigqibo: 0.01mg / L Ukuchaneka: ±2% FS
TempI-0-50 ℃ ；
I-chlorine eseleyo liqondo eliphantsi le-chlorine eseleyo emanzini emva kwexesha elithile okanye ixesha lokunxibelelana emva kokufakwa kwayo okokuqala. Inika ukhuseleko olubalulekileyo emngciphekweni wongcoliseko lweentsholongwane olulandelayo emva konyango- isibonelelo esahlukileyo nesibalulekileyo kwimpilo yoluntu.
I-klorine yimichiza efikelelekayo kwaye ifumaneka ngokulula ethi, xa inyibilikiswa emanzini acocekileyo ngokwaneleyo izixa, ziya kutshabalalisa uninzi lwezifo ezibangela ukuba kungabikho ngozi ebantwini. Iklorin, Nangona kunjalo, isetyenziswa njengoko kutshatyalaliswa izinto eziphilayo. Ukuba kongezwe i-chlorine eyaneleyo, kuyakubakho eseleyo kwi amanzi emva kokuba zonke izinto eziphilayo zitshatyalalisiwe, oku kubizwa ngokuba yi-chlorine yasimahla. (Umzobo 1) Iklorini yasimahla iya kuthanda hlala emanzini ide ilahleke kwilizwe langaphandle okanye isetyenziselwe ukutshabalalisa ungcoliseko olutsha.
Ke ngoko, ukuba siyavavanya amanzi kwaye sifumanise ukuba kusekho iklorine yasimahla eshiyekileyo, oko kungqina ukuba kuyingozi kakhulu Izinto ezisemanzini zisusiwe kwaye kukhuselekile ukusela. Oku sikubiza ngokuba kukulinganisa iklorin intsalela.
Ukulinganisa intsalela yeklorine kunikezelo lwamanzi yindlela elula kodwa ebalulekileyo yokujonga ukuba amanzi oko kusiwayo kukhuselekile ukuba kungaselwa
I-DDG-1.0PA Isenzi sokuSebenza soShishino
I-DOG-2092 yeemitha ze-Oxygen yeemveliso ezinyibilikisiweyo
I-PH8022 ye-Industrial Water Pure sensor